सरलीकृत कुण्डलिनी योग दिक्षा शिविर समापन - SKY Nepal
काठमाडौं । कीर्तिपुर–१, ट्याङ्गलाफाँट स्थित सरलीकृत कुण्डलिनी योग नेपालले यहि १७-२६ पौष २०७६ को अवधिमा कुण्डलिनी योग दिक्षाको छैठौं शिविर संचालन ग-यो । शिविरका सहभागीहरुले कुण्डलिनी जागरण र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तरिका सिक्नु भयो ।
यसै क्रममा सहभागीहरुले आत्म–निरीक्षणको विधी सिकेर आफ्नो र प्रकृतिको रहस्य जान्ने तरिका प्राप्त गर्नु भयो । साथै शरिरलाई स्वस्थ राख्ने युक्ति क्रमश: सरलिकृत शारिरिक व्यायाम र कायाकल्प विधीको प्रशिक्षण पनि प्राप्त गर्नु भयो । सरलीकृत कुण्डलिनी योगको दिक्षा तथा लगायतका ज्ञान डा. जयसिंह साह र डा. रोजन घिमिरेले प्रदान गर्नु भएको थियो ।
योग शिविरको अन्तमा सहभागीहरुले सरलीकृत कुण्डलिनी योगको अनुभव राम्रो भएको र समाजमा सबैको लागि उपयुक्त हुने भएकोले यस विधिको विस्तार गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । सहभागी श्री टिकाराम सुबेदिले यो ज्ञानबाट प्राप्त आशिर्वादको प्रकृयालाई कृषी क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने आफ्नो अठोट रहेको कुरा व्यक्त गर्नु भयो ।
सरलीकृत कुण्डलिनी योगबारे थप जानकारी यस केन्द्रको www.skynepal.org.np वा www.facebook.com/SiKuYogNepal साईटबाट वा ९८४३३६६५८७ वा ९८१८३९१५१४ मा फोन गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
आइतवार, भाद्र २८ २०७७०३:३५:११